Akhri: Maxey hooyooyinka iyo dumarka soomaalida ah Aftenposten uga sheegeen arrinta khilaafka Tawfiiq. - NorSom News
Akhri: Maxey hooyooyinka iyo dumarka soomaalida ah Aftenposten uga sheegeen arrinta khilaafka Tawfiiq.
Wargeyska Aftenposten ayaa cadadkiisa maanta kusoo qaatay warbixin ay ka diyaariyen wareysi uu wargeysku la yeeshay 30-meeyo hooyooyin iyo dumar soomaali ah, kuwaas oo laga wareystay dareenkooda ku aadan xaalada khilaafka masaajidka soomaalida ee maalmahan warkiisa aad looga hadal hayay warbaahinta Norway. Warbixinta Aftenposten ayaa barraha bulshada soomaalida iyo cadaankaba ka dhalisay doodo kulul oo xamaasad badan ay la socoto.
Nuxurka warbixinta Aftenposten oo dheereyd, ayaa ah in hooyooyinku ay aad uga xunyihiin kooxaha ragga soomaalida ah ee ku hardamaya maamulka masaajidka, ayna dhagahooda ka daaleen maqalka khilaafkan mudada dheer jiitamayay, walina aan xal loo helin. Sidoo kale ay rabaan in markan ay iyagu ka dumar ahaan arrinta soo galaan oo ay helaan xuquuq talo-galineed, maadaama ay iyaguba yihiin xubno masaajidka katirsan oo cod leh.
Dumarka ayaa sidoo kale Aftenpostenu sheegay inay dareensanyihiin in loo yeerto marka loo baahdo cunto karin, dhaqmo iyo lacag uruuris, balse aan laga talo galin arrimaha kale ee maamulka masaajidka la xiriirta. Gaar ahaana arrimaha taabanayo ilmaha ay iyagu dhaleen ee masaajidka ku xiran ama nooca shaqo ee loo baahanyahay in la qabto, si aktivitet caruuraha loogu sameeyo. Iyaga oo cadeeyay in lacago badan laga qaado, dowladuna ay masaajidka lacago badan oo kale ku taageerto, hadana aysan ogeyn meelaha ay lacagtaas maraan iyo wax lagu qabto.
Qaar kamid ah hooyooyinka ayaa sidoo kale Aftenposten u sheegay in maalintii sabtida laga xirtay albaabka, loona diiday inay soo galaan, si ay codkooda iyo arrigtidooda uga dhiibtaan arrinta masaajidka, waxeyna sheegeen inay codsanayaan in masaajidku uu yeesho gudi a kooban dhalinyaro wadankan wax ku baratay oo gabdho iyo raggba leh, kuwaas oo ku fakaraya oo kali ah wixii masaajidka iyo dadka xubnaha ka ah u wanaagsan.
Aftenposten ayaa dhanka kale wareystay hogaanka masaajidka Tawfiiq, Hakiim Ismail oo sheegay inay been tahay in sabtidii xubno masaajidka katirsan loo diiday inay soo galaan, si ay u codeeyaan. Isaga oo arinta dhaqaalaha kaga jawaabay in masaajidku uu leeyahay xisaabxir diiwaangashan oo hey, addaha dowlada ee ku shuqul leh loo gudbiyo.
Arrinta cabashada dumarka ayuu kaga jawaabay inaysan horey u jirin dumar isaga soo diiwaangaliyay oo rabay inay kamid ah noqdaan gudiga masaajidka, arintaasna uu masaajidku hada soo dhaweynayo.
Maxamed Faarax oo isna ah afhayeenka guruuba kale ee kasoo horjeedo gudiga masaajidka ayaa isna sheegay in dumarku ay mar walba yihiin xubno muhiim ah oo aan looga maarmin shaqada masaajidka, ayna wax ka badan ka shaqo badanyihiin ragga, marka ay timaado howlaha masaajidka ee waaweyn.
Dhanka kale wuxuu Maxamed gudiga hada masaajidka fadhiyo ku eedeeyay in qofkii ka fikir duwan ay masaajidka liiskiisa ka tuuraan, ama ay boolis ku dalbadaan.
Isku soo wada duube, maqaalka Aftenposten ee wareysiga hooyooyinka soomaalida ah ayaa u muuqdo inuu baansiin kusii shubay khilaafkii awal horey uga taagnaa masaajidka oo hada hadalheyntiisu uu gaaray meelo aad u badan oo markii hore aan ka warqabin ama wax badan ka ogeyn arrimaha masaajidka.
Xigasho/kilde: Afposten-papiravis-14-8-2020, side 20-21.
Previous articleSoomaalida Denmark oo faquuq Corona la xiriira kala kulmayo warbaahinta.
Next articleDowlada oo 13 sano kadib ku guuleystay diyaarinta Pass-ka cusub iyo kaarka aqoonsiga.